Radio Daljir oo ku baahaya badi dalka maantana waa UFAYN (dhegayso | daawo) – Radio Daljir
Radio Daljir oo ku baahaya badi dalka maantana waa UFAYN (dhegayso | daawo)
Maajo 11, 2020 10:19 g 0
Radio Daljir oo ah warlaliska ugu baaxadda weyn Geeska Africa ayaa ku baahaya badiba geyiga Soomaaliyeed, waxaana Radio Daljir xarunti sagaalad uu asbuucaan ka furay degmadda Ufayn ee gobalka Bari. Bulshada UFAYN oo kaashanaya maamulka degmada ayaa waqti dheer baadigoob ugu jiray sidii Daljir ay xarun ugu yeelanlahayd degmada.
Agaasimaha Radio Daljir ee xarumaha Daljir Bossaaso, Qardho, Badhan iyo Ufayn Mudane Maxamuud Cabdi Ibraahim ayaa sheegay in Daljir Ufayn ay hawadda si toosa u soo gashay maalintii Jimcaha ee siddeeda bisha ahayd, waxaana laga dhegaysanayaa dhammaan degmooyinka iyo Tuulooyinka Hoosyimada degmada Ufayn.
Guddoomiye Kuxigeenka degmadda Ufayn oo asna Radio Daljir la hadlay ayaa isbaalarinta Radio Daljir ee goboladda dalka ku tilmaamay mid maanta farxad iyo reynreyn u ah deegaanka Ufayn. Guddoomiyaha ayaa sheegay in ay waqti badan sugayeen in Daljir ay xarun ka hirgaliso degmada Ufayn, taas oo maanta rumoowday.
Bahda waxbarashada Ufayn iyo madaxda shirkadddaha isgaarsinta oo la hadlay Daljir ayaa inoo sheegay in ay sugayeen Daljir inay saldhigato Ufayn, maantana hawada Ufayn ay ku jirto xarunti sagaalaad ee Radio Daljir.
Qorshayaasha maamulka Radio Daljir ee sannadkan 2020 waxaa qayb ah ka ballaarinta xarumaha Daljir oo lagu siyaadiyo illaa 4 xarumood lagana hirgalin doono Puntland, Galmudug iyo Jubaland.
Hoos kaga bogo warbixinta ballaarinta Daljir.
Maqaalo Kale 280 Wararka 19902
TALOKEEN: Talooyinka ku saabsan Fatahaadaha (dhegayso)